Wadada Warbaahinta ee Bulshada ee Cimri dhererka GDPR | Martech Zone
Maalin ku qaad inaad ku dhex wareegto London, New York, Paris ama Barcelona, ​​xaqiiqdii, magaalo kasta, waxaadna lahaan doontaa sabab aad ku aaminto haddii aadan ku wadaagin baraha bulshada, taasi ma dhicin. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha UK iyo Faransiiska waxay hadda tilmaamayaan mustaqbal ka duwan warbaahinta bulshada gebi ahaanba. Cilmi baaris ayaa muujisay rajooyin mugdi ku jira kanaallada warbaahinta bulshada maadaama kaliya 14% macaamiisha ay kalsooni ku qabaan in Snapchat uu wali jiri doono toban sano. Hase yeeshe, taa bedelkeeda, emaylku wuxuu u muuqday sidii madal dadku u maleynayaan inay istaagi doonto imtixaanka waqtiga.
Natiijooyinka ka soo baxay Boostada cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in barmaamijyada cusub hadda loo arko inay yihiin isbeddello soconaya muddo gaaban, halkii qaabab isgaarsiineed oo muddo dheer soconaya ah, xitaa iyadoo ay jirto Snap, shirkadda waalidka ee Snapchat ee IPO-horaantii sanadkan. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego aragtida sharciga, mustaqbalka wacyi galinta bulshada iyo dhagaystayaasha waxay ku xirnaan doontaa ogolaansho cad sida aan u aragno hordhaca Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka Guud (GDPR) Maajo sanadka soo socda. Warbaahinta bulshada ayaa lagu riixi doonaa adduunka dooran in suuqgeynta iyo isgaarsiinta macaamiisha weligood isku mid ma noqon doonaan…
Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ee Midowga Yurub (GDPR) wuxuu badalayaa Amarka Ilaalinta Macluumaadka ee 95/46 / EC waxaana loogu talagalay in la waafajiyo sharciyada asturnaanta xogta ee guud ahaan Yurub, si loo ilaaliyo loona xoojiyo dhammaan macluumaadka Muwaadiniinta Midowga Yurub iyo dib u qaabeynta qaababka ururada gobolka oo dhami u wajahaan xogta. asturnaanta Taariikhda Fulinta: 25 Maajo 2018 - waqtigaas ururadaas aan u hogaansamin waxay la kulmi doonaan ganaaxyo culus. GDPR Bogga Hoyga
Sidee diyaar u yihiin noocyada inay u hoggaansamaan GDPR? Sheekooyinka Instagram, Xayeysiimaha 'Snap' iyo 'Pinterest Pins' dhammaantood waxay arkeen sumcado u soo ifbaxaya aagagga bulshada si hufan, laakiin waligood ma aysan helin inay ka helaan ogolaansho la taaban karo kuwa isticmaala. Sidee bay magacyadu ula qabsan doonaan deegaankan cusub, oo ay ula falgalayaan dhagaystayaasha keligood gacanta ku haya marin u helka xogtooda?
La Qabsiga Bedelka
Hirgelinta GDPR waxay xoojin doontaa ilaalinta xogta macaamiisha iyadoo la xoojinayo xeerarka asturnaanta xogta ee aadka loo adkeeyay iyo soo bandhigida ikhtiyaarka laba-geesoodka ah. Laga bilaabo Maajo sanadka soo socda, noocyadu waa inay aad uga taxaddaraan sida iyo goorta ay la xiriiraan dhagaystayaasha. In kasta oo u hoggaansamiddu tahay mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan, magacyadu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay dammaanad ka qaadaan inay dhiirrigelinayaan dhagaystayaasha si loo siiyo oggolaansho ballaadhan in xogtooda la hawl-geliyo loona xayeysiiyo shaqsi ahaan.
Calaamaduhu waa inay si sharci ah u caddeeyaan in rajo kasta oo ay la falgalaan ay si firfircoon u oggolaatay inay doonayaan in loo suuq geeyo; sanduuqa ka-bixidda aan la dooran ayaa kugu filnaan doona. Si ay dadku uga mashquulaan oo ay u diiwaangashan yihiin, magacyadu waa inay ahaadaan kuwo ka falceliya baahiyahooda iyo danahooda, iyagoo u adeegaya khibrad ay ka doonayaan kanaal kasta.
Waxay qaadan doontaa shaqo badan iyo adkeysi shirkadaha warbaahinta bulshada iyo sumadaha si loo hubiyo in dhagaystayaashu ay dhinac yihiin. Tusaale ahaan, markii wax laga weydiiyay cusbooneysiinta waaweyn ee isgaarsiinta calaamadaha ee loo maro marinnada bulshada, kaliya 6% macaamiisha ayaa ogaaday Instagram iibso badhanka iyo isbadalka bogga ee bogga.
Tani waxay si cad u soo jeedineysaa in macaamiisha aysan si firfircoon u dareemin isbeddellada ku dhaca kanaallada ay adeegsadaan haddii aysan dhab ahaantii saameyn ku yeelan isticmaalkooda maalinlaha ah. Si loogu guuleysto ogolaanshaha suuqgeynta, barnaamijyadan waa inay u xuubsiiban si ay ugu habboonaadaan baahiyaha macaamiisha isla markaana ay khibradda u ilaaliso iyadoo aan loo eegin qaab waxqabad leh iyo farsamooyin shaqsiyeed
Ku Qaadashada Hoggaanka Emailka
Xayeysiisyada caanka ah ee bulshada waligood maahan inay hubiyaan inay helayaan 'opt-in' ka hor inta aysan macaamiisha arkin, hase yeeshee kanaalada ayaa midba midka kale ka baran karo sida ugu habboon ee loola jaan qaadi karo xeerarka soo socda. Barmaamijyada sida Snapchat-ka ayaa abuuraya buuq ka dhex jira dadka qaarkood xilligan, laakiin emaylku weli waa kanaal ay macaamiishu ku sii wadaan socdaalkooda iibsiga.
Email waa xariif. Waxay ka jawaab celisay sida macaamiisha ay ugu adeegsadaan baraha wax adeegsiga qaab bulshada aysan wali u adeegsan. Kuweena cilmi waxay ogaadeen in ku dhowaad saddex meelood meel dukaameeyayaashu ay raadinayaan awoodda ay wax uga dukaameystaan ​​ama ay wax uga iibsadaan si toos ah emayl dhexdooda si safarka uga dhigo mid aan xasilooneyn oo sahlan in la dhammaystiro. Emailku si tartiib tartiib ah ayuu shaqsiyan ugu noqonayaa waxyaabaha dadku ay baareen ama kaabayaan alaabada ay dhowaan iibsadeen.
Halka macaamiisha ay yihiin sii kordheysa kuna tiirsanaanta baraha bulshada, iyaguna sidoo kale waa kuwo aad loo waafajin karo waxaana laga yaabaa inaan ka fogayn inaan aragno sanduuqa dhaqameed oo gebi ahaanba dib loo hagaajinayo adeegyada farriimaha degdegga ah sida Slack iyo Messenger. Ganacsiyo badan ayaa durbadiiba isku dayaya inay yareeyaan taraafikada emaylka iyagoo ku soo bandhigaya kanaalada xafiisyadooda.
Slack iyo Messenger waxay horey u yaryihiin talaabooyin dhowr ah kahor bulshada maxaa yeelay waxay yaqaanaan sida loo abuuro ogolaanshaha. Diritaanka farriimaha, ama wadaagida waxyaabaha la marinayo kanaallada waxay u baahan tahay ka-gaabis badiyaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo OAuth 2.0 (heerka warshadaha u sahlaya marin-u-helka xogta isticmaalaha).
On Slack, waxay ku xiran tahay isticmaalaha inuu ka jawaabo farriimaha si uu u helo macluumaadka ay doonayaan. Tusaale ahaan, habka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Slack' wuxuu ku bilaabmaa qaab wadahadal asal ah:
Haye waxaan helnay macluumaad cusub oo kusaabsan jiilaalka cusub - ma jiraan wax aad jeclaan lahayd inaad waxbadan ka maqasho?
Isticmaaluhu wuxuu markaa go'aansadaa haddii ay doonayaan inay la falgalaan astaanta. Wadahadal laba dhinac ah ayaa ah habka ugu aaminka badan uguna macquulsan mustaqbalka GDPR.
Dhageystayaasha, tani macnaheedu waa hoos u dhac weyn oo ku yimid SPAM aan loo baahnayn, laakiin sidoo kale waxay lashaqeysaa laynka jiilka yar, jiilka kun-sano jirka ah ee doonaya in la dheefshiido, waxyaabaha ku qotoma shuruudahooda. Maaddaama ay emayllada geesaha u dhow yihiin uguna dhow yihiin kan ugu fiican wadahadalka macaamiisha, kooxaha waawayn ee bulshada ka dhexayn kara waxay ka qaadan karaan barashooyin badan oo muhiim ah e-maylka ku saabsan sida ay ula qabsato, u cusbooneysiiso uguna bislaato.
Tags: u hoggaansamida xayeysiintawaafaqsanaantau hoggaansamida emaylkaXeerarka Badbaadada Macluumaadka Guud EUOAuth 2.0u hoggaansanaanta warbaahinta bulshada